Yakanakisa iPhone maapplication ekuchinjisa nhare yako online | IPhone nhau
Yakanakisa iPhone maapplication ekuchinjisa nhare yako online
Kana uchigara uchishandisa kadhi risati rabhadharwa pane yako iPhone kana pane iyo iPad ine data rekubatanidza, zvinowanzoitika kuti une yako oparesheni yekushandisa yakaiswa kuti ikwanise kuigonesa iyo pese pazvinenge zvakakodzera, pasina kuenda kumaATM, tobacconists, kiosks kana chero imwe nzvimbo inogadzira inoita prepaid nhamba recharges.
Kana tikashandisa makadhi akabhadharwa kare kubva kune vashandisi vakasiyana, isu tine nhengo yemhuri kunze kwenyika yedu, tinoda kudzoreredza foni yeshamwari… hatikwanise kuva nemaapplication evose vashandisi akambomisikidzwa kudzoreredza chero nhamba yefoni. Neraki, kune aya marudzi ematambudziko pane mhinduro yakapusa kupfuura zvaungafungidzira.
MuApp Store tinayo yatinayo zvakasiyana mafomu anotibvumidza kuti tiwedzerezve nhamba dzakabhadharwa kubva kunenge nyika dzese dzepasi uye dzinoenderana nevazhinji vashandisi, saka kana tikazviwana tiri mumamiriro ezvinhu seaya andakataura mundima yapfuura, nekungoshanda kumwe chete, ticha gadzirisa dambudziko iri.
2 Ding: Nhare Yekutengesa
4 Kufunga nezvazvo
MobileRecharge ndeimwe yeanonyanya kuzadza mafomu anowanikwa muApp Store, uye inotibvumidza kuti tiite recharge chero foni inobhadharwa munyika dzinopfuura zana nemakumi mana uye kuburikidza nevanopfuura mazana mana nemakumi matatu evashandisi. Kwedu, nyika dzinotaura chiSpanish, MobileRecharge inowanikwa mu Spain, Mexico, Dominican Republic, Cuba, El Salvador, Honduras, Colombia, Nicaragua, Colombia, Peru, Costa Rica...
Ne MobileRecharge tinogona recharge chero prepaid nhamba Altice, Airtel, AT & T, Claro, Cubacel, Nauta, Digicel, Lime / Kuyerera, Movistar, MTN, Orange, Telcel, Tigo, T-Mobil, Vodafone kumisangano inozivikanwa zvikuru asi zvakare inopa rutsigiro, mune Spain Spain yeDigiMobile , República Móvil, Euskaltel, Happy Movil, MasMovil ...
Kuwedzera chero nhamba yefoni, isu tinongoda kadhi rechikwereti, kadhi rekubhengi kana kunyangwe tora kumusoro nhare nePayPal. Refills anoitwa ipapo ipapo uye anotipawo isu a vatengi maawa 24 pazuva, Mazuva manomwe pasvondo, kuwedzera kune chat uye email.
Ichi chishandiso chave kupa masevhisi ayo kweanopfuura makore gumi, nekudaro ichiva chimwe chevakuru, ndosaka iri imwe yesarudzo dzakanakisa. Zvakare, nguva nenguva, isu kupa kukwidziridzwa izvo zvinotibvumidza kuti tiwedzerezve zvakapetwa kana katatu, saka tinofanirwa kugara tichitarisa kushambadza kunowanikwa tisati tajairazve
Kuti uise iyi application pane yedu iPhone, inofanirwa kutarisirwa ne iOS 9 kana gare gare. Iko kunyorera kunoshandurirwa muchiSpanish, saka hazvizove dambudziko kusangana naro nekukurumidza.
MobileRecharge - Recharge Balancevakasununguka
Ding: Nhare Yekutengesa
Chimwe chikumbiro chinotibvumidza kuti tiwedzerezve nhamba yedu yekubhadharisa kana yechero munhu upi zvake, zvisinei nenyika uye neanoshanda ndiDing, chishandiso chiri nyore pane sevhisi, sezvo isu tisingafanirwe kuisa nhamba yefoni yekutaurirana naye. iwe tinoda recharge, isu tinongoda sarudza icho kubva pane zvatinoita kuitira kuti vese vanoshanda varipo munyika varatidzwe.
Ding inoshanda mune dzinopfuura nyika zana nemakumi mana uye inopa sevhisi pakati pevanoshanda vanopfuura mazana mashanu. Panyaya yeSpain, naDing tinogona kudzorerazve mafoni akabhadharwa kubva kuEuskaltel, HablaFacil, Happy Movil, Lebara, Llamaya, Lyca, Yoigo, Vodafone, Tuenti, Movistar, Hits uye Best.
Vamwe veava vanoshanda Ivo havana kufanana ayo anowanikwa mune yeMushandisiRecharge application, saka isu tinofanirwa kuitora tichifunga kana tatanga kushandisa chishandiso cherudzi urwu.
MuLatin America, Ding anotibvumidza kuti tiite recharge nhamba dzerunhare dzakabhadharwa dzevanoshanda: Claro, Movistar, Nextel, Yemunhu, Entel, Tigo, Viva, Mhandara Nhare, VTS, Telsur, yakapusa, Cubacel, CNT, Tuenti, AT&T, Unefon ...
Pakati penzira dzekubhadhara idzo Ding anotipa isu tinowana makadhi echikwereti uye echikwereti kuwedzera kuPayPal. Kuti ugadzire iyi application, yedu iPhone inofanirwa kutarisirwa neIOS 12 kana kupfuura. Iko kunyorera kuri muchiSpanish, saka mutauro unenge usiri dambudziko kana zvasvika pakukurumidza nawo.
Ding: Nhare Yekutengesavakasununguka
Mushure mekupedza iyi runyorwa neyakanakisa iPhone app yekumutsiridza nhare yako neRefillto, imwe yeakanakisa maficha anotibvumidza kuti titorezve zvakabhadharwa mafoni mune anopfuura Nyika zana nemakumi mana uye pakati pevashandisi vanopfuura mazana mana.
Tambanudza kumusoro nhamba yakabhadharwa neRefillto Izvo zviri nyore sekubvumidza iyo application kuti iwane bhuku redu renhare, tsvaga iyo nhamba yefoni yemunhu watinoda kumutsidzira iyo nhamba yefoni, sarudza anoshanda, iyo mari yekuchaja uye kubhadhara.
NaRefillto tinogona recharge chero nhamba kubva kuLatin America kubva kune chero eanoshanda ese anowanikwa mudunhu senge Claro, Movistar, Nextel, Yemunhu, Telsur, yakapusa, Cubacel, Entel, Tigo, VTS, CNT, Tuenti, Viva, Mhandara Nhare, AT&T, Unefon ...
Nzira dzekubhadhara dzinopihwa nechikuva ichi dzakafanana nedzimwe: kiredhiti kana kiredhiti kadhi uye PayPal. Kuti ugadzire iyi application, yedu iPhone kana iPad inofanirwa kunge iri inotungamirirwa neIOS 12 kana kupfuura. Iko kunyorera kuri muchiSpanish kuwedzera kune mimwe mitauro yatinofanira kusarudza kekutanga kuvhura iko kunyorera.
Refillto: Nharembozha rechargevakasununguka
Ipo anoshanda oparesheni havatibhadharise chero basa Paunenge uchichinjazve ako akabhadharwa manhamba, izvi zvinoshandiswa zvinotora komisheni diki inosiyana zvichienderana nemari yakazara yekuchinjazve.
Ehezve, iwo mukana wavanotipa isu kuwedzera mukunyaradza kwavo, kana uchikwanisa kubhadhara iyo diki komisheni, zvinopfuura zvigadzirwa izvo zvakaipira kuisa akasiyana maficha kubva kune akasiyana maanoshanda kuti recharge prepaid nhamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Yakanakisa iPhone maapplication ekuchinjisa nhare yako online
Vagadziri vanogamuchira kokero yekuitisa pamhepo zvikamu neApple
Apple inogadzirisazve iyo HomePod Mini's firmware kutora mukana weU1 napedyo chip.